Ubuntu က GCC compiler မှာ error တက်နေလို့ဗျို့ - MYSTERY ZILLION
Ubuntu က GCC compiler မှာ error တက်နေလို့ဗျို့
*(Txant)* May 2011 edited May 2011 in Ubuntu အနော့်ရဲ့ ubuntu ရဲ့ terminal က GCC compiler မှာရှိတဲ့ vi ကနေ C coding တွေရေးပါတယ်......ဒါပေမယ့်ရေးရတာ အဆင်မပြေဝူးဗျ......ဖြစ်ပုံက coding ရေးတဲ့နေရာမှာ up arrow ,down arrow စတာတွေကို character ဖမ်းပြီးတော့ D A C တွေဘာတွေပေါ်နေတယ်ဗျ......ကျေးဇူးပြုပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပေးကြပါခင်ဗျ..........။ Tagged:
yenaing May 2011 Registered Users sudo apt-get install vim vim or gedit နဲ့ ရေးကြည့်ပါ .. CalmHill May 2011 Administrators Compatible Mode ဖြစ်နေလို့ပါ No Compatible Mode ကိုပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲ။Command Mode မှာအောက်မှာ ပြထားတဲ့ Command ကိုရိုက်ပါ အဲဒါဆိုရသွားပါလိမ့်မယ်။:set nocompatible *(Txant)* May 2011 Registered Users CalmHill said:Compatible Mode ဖြစ်နေလို့ပါ No Compatible Mode ကိုပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲ။Command Mode မှာအောက်မှာ ပြထားတဲ့ Command ကိုရိုက်ပါ အဲဒါဆိုရသွားပါလိမ့်မယ်။:set nocompatible
ကျေးဇူးပဲ အကို.......G++ ဆိုရင်ရော အကို အနော် ထပ်ပြီး install လုပ်ရဦးမှာလား.....သူ့ကို install လုပ်ဖို့ တစ်ချက်လောက်လမ်းညွှန်ပြသပေးပါဦး အကို :p CalmHill May 2011 Administrators [quote="*(Txant)*"]ကျေးဇူးပဲ အကို.......G++ ဆိုရင်ရော အကို အနော် ထပ်ပြီး install လုပ်ရဦးမှာလား.....သူ့ကို install လုပ်ဖို့ တစ်ချက်လောက်လမ်းညွှန်ပြသပေးပါဦး အကို :pG++ အတွက်ဆိုရင်တော့ g++ Package လိုပါတယ် အဲဒါကို Install လုပ်လိုက်ပါ။ နောက်တစ်ခုက ဘာဖြစ်လို့ vi နဲ့ရေးတာပါလဲ vi ဟာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ Text Editor တစ်ခုပါအဲဒါက ငြင်းစရာမရှိပါဘူး အနှစ်သုံးဆယ်ကျော်ပါပြီ ဒါပေမယ့်သုံးနေဆဲ Editor တစ်ခုပါ။ ခက်တာကသုံးတတ်ရင် အင်မတန်ကောင်းပေမယ့် မသုံးတတ်ရင် အင်မတန်ပြဿနာရှာပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက C++ နဲ့ vi ဘာမှမပါတ်သက်ပါဘူး။ C++ ရေးချင်တယ်ဆိုရင် IDE တစ်ခုခုကိုသုံးပါ အသုံးများတာက Netbeans or Eclipse သုံးပါတယ် ဒါပေမယ့်အဲဒါတွေက ကြီးလွန်းတယ်ထင်ရင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအဖြစ် Geany လိုဟာကိုသုံးပါ သူကတော့သာမန် Editor တစ်ခုလိုပါပဲ ဒါပေမယ် Compile/Build လုပ်လို့အလွယ်တကူရပါတယ် Turbo C လိုသုံးဖူးတယ်ဆိုရင် Geany ကိုသဘောကျမှာပါ ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး ရေးချင်တဲ့ ပရိုဂရမ်ကို New ဆိုပြီးရေးရုံပါပဲ Project တွေဘာတွေ Create လုပ်စရာတွေလည်း မလိုပါဘူး။ ကျွန်တော် vi ကိုအကောင်းဆုံး သုံးတတ်ပါတယ် အများအားဖြင့် GUI တစ်ခုမှမရှိတဲ့ Terminal Console မှာအလုပ်တာများပါတယ် ဒါတောင်မှ Program ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် vi ကိုဘယ်တော့မှ မသုံးပါဘူး။ ဒါပေမယ် vi ကိုသဘောကျလွန်းလို့ Netbeans မှာ vi simulated plugins တပ်လိုက်ပါတယ် အဲဒီတော့ Netbeans ရဲ့ Features တွေကျွန်တော်ရပါတယ် အဲလိုပါပဲ vi ရဲ့ Features တွေလည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရသွားတာပေါ့။G++sudo apt-get install g++Geanysudo apt-get install geanyNetbeans1. sudo apt-get install netbeans2. Launch Netbeans IDE3. Tools->Plugins->Available Plugins->C/C++ (Check)->Install (Click)Netbeans Vi Plugins1. Download and Extract from http://sourceforge.net/projects/viex/2. Launch Netbeans IDE3. Tools->Plugins->Downloaded->Add Plugins->Choose extracted file->Install4. You can see the new icon Vi on the tools bar.Eclipsesudo apt-get install eclipse(Try it, I rarely use Eclipse)Eclipse Vi PluginsDownlaod from http://www.viplugin.com(Try it, I rarely use Eclipse) Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla